जोनी लीभर : गरिबीका कारण ७ कक्षामा नै पढाइ छोडेर सडकमा बेच्थे कलम, कसरी पाए बलिउडमा 'ब्रेक' ? - Bardiya Times
जोनी लीभर : गरिबीका कारण ७ कक्षामा नै पढाइ छोडेर सडकमा बेच्थे कलम, कसरी पाए बलिउडमा ‘ब्रेक’ ?
२०७८ श्रावण ३० गते, शनिबार १८:५१ मा प्रकाशित
बलिउडका पहिलो ‘स्टयाण्ड अप कमेडियन’ भनेर चिनिएका जोनी लिभरले ३५० भन्दा बढी फिल्ममा काम गरिसकेका छन् ।
उनले आफ्नो दमदार अभिनयले धेरैको मन जितेका छन् । प्रखर अभिनयका कारण जोनीले १३ पटक फिल्मफेयर अवार्डमा नोमिनेशन भएका छन् ।